तपाइ कृषि पेशा गर्दै हुनुहुन्छ, अव सरकारले आधा खर्च दिदैछ, यसरी दिनुहोस निवेदन ? - Silichung.com
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०८:३०
काठमाडौ । सरकारले ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ यसै वर्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि कार्यविधिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६’ स्वीकृत भइसक्यो ’, महाशाखा प्रमुख शिवाकोटीले भनिन्, ‘केही कार्यक्रम वृस्तितिकरण गरिएको छ। स्वीकृतिका लागि केही दिन भित्र नै अर्थमन्त्रालय पठाउँछौं।’
कार्यक्रममा कुन–कुन जिल्ला सहभागि हुन पाउनेरु
कसरी दिने निवेदन ?
निवेदनमा के के कुरा उल्लेख हुनुपर्ने ?
छनोट प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
भुक्तानीको प्रक्रिया के हुन्छ ?
अनुदानग्राहीले प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा सूचना प्रणाली सफ्टवेयरमा राख्नुपर्नेछ। सोही आधारमा अनुगमन हुने छ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रूपैयाँ अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो। स्राेत सेताेपाटी